काठमाडौँ, फागुन १८ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न बुधबार (फागुन १८ देखि) स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । मङ्गलबार बसेको आयोग बैठकले २०७४ वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि यो आचारसंहिता जारी गरेको हो । आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फागुन १८ बाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै आयोगले बुधबार नै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवसँग आचारसंहिता लागू भएको सन्दर्भमा आवश्यक छलफल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दिनुभयो ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को (दोस्रो संशोधन), २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ लागू गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहित नेपाल सरकार, मातहतका निकाय, स्थानीय निकाय, आमसञ्चार माध्यम, गैरसरकारी सङ्घसंस्था लगायत सबैलाई लागू हुनेछ । उम्मेदवारलाई भने २०७४ वैशाख १६ गते उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि मात्रै लागू हुनेछ ।
यो निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक दल, नेपाल सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, सरकारी निकाय, मतदाता, आमसञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संस्था, पर्यवेक्षक लगायतले पालना गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारका मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्नुहुँदैन ।
सुरक्षा योजना तयार
मङ्गलबार नै निर्वाचन आयोगमा गृह मन्त्रालयबाट तयार पारिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ । सुरक्षा योजना प्रस्तुत गर्नुहुँदै गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीबाट आयोगले समय समयमा दिएको निर्देशनलाई ध्यान दिई प्रस्तुत सुरक्षा योजना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यसमा आयोगको पृष्ठपोषण पछि केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला (स्थानीय तह)मा समेत सबै सुरक्षा निकायको भूमिका स्पष्ट गरी समन्वयात्मक रूपमा जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
छलफल कार्यक्रमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तहमा कार्यरत सुरक्षा संयन्त्रलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने, जिल्लास्तरमा प्रहरी प्रशासनले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन अविलम्ब निर्देशन पठाउन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता उत्साहजनक हुने भएकाले यस विषयलाई समेत ध्यान दिई सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
साथै प्रस्तुत गरिएको सुरक्षा योजना सम्बन्धमा आयुक्त इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार शाह तथा सचिव गोपीनाथ मैनालीले समेत जिज्ञासा र सुझाव राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
आचारसंहिता लागू हुने निकाय
 नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको मन्त्री,
 स्थानीय निकाय/तह,
 स्थानीय निकाय/तहका कर्मचारी,
 सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी,
 सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी,
 नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा तत् निकायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी,
 निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी,
 राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन,
 सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम,
 निजी तथा गैरसरकारी संस्था,
 सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति